Ụbọchị My Pet » 6 Atụmatụ Iji gbochie nke mbụ Ụbọchị ịbụ ikpeazụ gị
site Jennifer Brown Anoghi n'ulo oba
6 Atụmatụ Iji gbochie nke mbụ Ụbọchị ịbụ ikpeazụ gị
emelitere ikpeazụ: Nov. 22 2020 | 2 min agụ
Mbụ ụbọchị. Anyị na-atụsi anya kpokọtara oge. Ha nwere ike ịbụ na-akpali akpali, ma na-eyi egwu. N'ọtụtụ ụzọ, ha na-na Ẹkot ọrụ ajụjụ ọnụ. Ace ya, ma ị nwere ike na-atụ anya ga-eme n'ọdịnihu elele, ịkpali, ma na-emesị nkwalite. (Ma ka olileanya a mma "arụmọrụ nyochaa".)
N'akụkụ aka nke ọzọ, eyi ihe na-ezighị ezi attire, na-ekwurịta okwu awkwardly, ma ọ bụ na-egosi na-kọrọ isi na-elekọta mmadụ graces, ma ị nwere ike ichefu ịbụ na-akpọ azụ ịga n'ihu.
Ma ka na-eche ihu ya: mpi nwere ike ịbụ ọkụ ma na Arenas.
Ebe a na- 6 omume ị ga-chọrọ ịmụta dị ka "Standard Operating usoro" maka na ihe niile na-mkpa mbụ ụbọchị.
1. Tinye gị mma ụkwụ na-atụ.
Ịbụ na oge. Uwe ihe ịga nke ọma. Nọgidenụ na-cell ekwentị n'okpuru eyiri. Ọ dịghị ihe nwere ike ịbụ ihe ọgba ma ọ bụ na-akụda mmụọ karịa inwe a ekwentị gaa mgbe niile n'oge nri. Ọ bụrụ na ị ga-ewere a oku na-aga site na onye, (n'ihi na ọ bụ ihe dị mkpa) na-agbalị ime ka ya nkenke– rịọrọ ya mgbaghara.
Cheta na "Ị dịghị mgbe na-a ohere nke abụọ na-eme ka a mbụ echiche."
2. Bụrụ onye na-ege ntị.
Nke a abụghị oge hog achịcha na mkparịta ụka.
Were ifịk mmasị n'ịmata onye nke ọzọ. Ekekọrịta a ihe ma ọ bụ abụọ banyere onye ị bụ na ihe ị na-eche na-eme ka ị na-iche ị. Zere arịọ intrusive ajụjụ.
3. Always-ekwesị ekwesị.
Cheta, ebumnobi ebe a bụ na-eguzo na a ezi ụzọ.
Unu rant banyere gara aga okpu mmekọrịta, agwa anya acha njakịrị, ma ọ bụ na-akpa àgwà ọjọọ ka ndị na enye ọrụ. Ọ pụrụ ime ka ị na-abịa dị ka ndị uncouth.
4. Lezienụ anya ka ozu asụsụ.
Ndi ị maara na 93% nke nkwurịta okwu kwuru na-abụ ndị na-abụghị ọnụ?
Ihe dị ka postcho, ọdịdị ihu, anya na ahu n'ọnọdu pụrụ inyere gị aka na-amata ma ọ bụrụ na gị na ụbọchị na-emekwa ụfọdụ na ndị nwere mmasị, ma ọ bụ na-enwe olileanya na i ga-efunahụ ha nọmba. Ṅaa ntị na ihe ịrịba ama.
5. Ị na-aga "Dutch!"
Finance ekwesịghị-abịa n'ihu romance na mbụ ụbọchị. Ma cheapness bụ a anya n'aka-apụ n'ihi na ọtụtụ ndị na-. Ọ bụrụ na ị ego aka, na-okike; tụlee a na-atọ ụtọ n'ụlọ esie nri na ọkụ kandụl na music.
6. Akwụsị na a ụtọ.
Nwee amara. Ọ bụrụ na ị nwere ezigbo oge, na-ekwu otú. -Eche nche na dị nnọọ ka mkpa dị ka na-amalite.
Soro ndị a na isii na-adọ Atụmatụ mee ka gị na mbụ ụbọchị mbụ ọnụego!
O nwere nnọọ ike ịbụ mmalite nke ihe pụrụ iche.
7 Ihe I Kwesịrị Ịmara Tupu mkpakọrịta nwoke na nwaanyị a Foodie
Olee otú Iji enwe gị mbụ Ụbọchị
Ejegharị ụgbọala na gị Pita
Romance, A chere ma ọ bụ ihe Anyị Na-eme?
Akpa a Nta Nwanyi Mgbe Ịgba Alụkwaghịm Mere Easy